यसै वर्ष कोरोनाको खोप आउने - AIM Khabar
गृह पृष्ठ > विश्व समाचार > यसै वर्ष कोरोनाको खोप आउने
यसै वर्ष कोरोनाको खोप आउने
June 22, 2020 January 19, 2021 GRISHI168
एजेन्सी, ७ असार । यसै वर्षभित्र कोरोना भाइरसको खोप विकास गरी उत्पादन समेत गर्ने लक्ष्यका साथ विभिन्न देश प्रतिष्पर्धामा छन् । जसमध्ये १३ वटा खोपको मानवमाथि परीक्षण भइसकेको छ । १२० भन्दा बढी परीक्षणको प्रारम्भिक चरणमा छन् ।
रुसले अगष्टमा मानव परीक्षण सकेर सेप्टेम्बरमा खोप उत्पादन गर्ने योजना समेत बनाइसकेको छ । औषधी कम्पनिहरु आष्ट्राजेनेका र मोर्डनाले यसै वर्षभित्र करोडौं डोज खोप उत्पादन गर्ने प्रतिवद्धता जनाइसकेका छन् ।
चीनमा छ वटा कोभिड १९ को भ्याक्सिनको मानव परीक्षण भइसकेको छ । जर्मनीको कम्पनि केयरभ्याकले सेम्टेम्बर वा अक्टोबरमा पहिलो नतिजा उपलब्ध गराउने जनाएको छ ।
विश्व स्वास्थ्य संगठनका मुख्य वैज्ञानिक डा. सौम्या स्वामिनाथनले यसै वर्षभित्र करोडौं डजेज भ्याक्सिन उत्पादन हुने आशा व्यक्त गरेकी छिन् । उनले २०२१ को अन्तसम्ममा दुई अर्ब डजेज भ्याक्सिन आइसक्ने बताएकी छिन् ।
विश्वकै सबैभन्दा ठुलो भ्याक्सिन उत्पादक ग्ल्याक्सोस्मिथक्लिन क्लिनिकल परीक्षण चरणमा पुगेको छ । उक्त कम्पनिले विस्तारै र स्थिर गतिमा खोप विकास गरिरहेको जनाइएको छ ।
भारतीय कम्पनिहरु पनि खोपको विकासमा योजनावद्ध तरिकाले लागेका छन् । पुनेस्थित सेरम कम्पनिले भ्याक्सिनको विकास गरिरहेको छ ।
इजरायल पनि भ्याक्सिन विकासको दौडमा छ । इजराजको इन्स्टिच्युट फर बायोलोजिकल रिसर्चले कोरोना भाइरसको भ्याक्सिनको परीक्षण सफलता पूर्वक सम्पन्न गरिसकेको दाबी गरेको छ । भ्याक्सिन यसै वर्षभित्र उत्पादन गरिसक्ने भनिएको छ ।
सरकारको निर्णयलाई निजी विद्यालयले टेरेनन्: लकडाउनको अवधिको पनि शुल्क तिर्न उर्दी !
उपमेयरले बैठकमै मेयरलाई ‘फटाहा’ भनेपछि बबाल…
December 16, 2020 December 16, 2020 Raju Thapa